निर्माता बने डिनेश डि.सी., होम प्रोडक्शनको पहिलो चलचित्र निर्देशन पनि आँफै गर्दै « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
निर्माता बने डिनेश डि.सी., होम प्रोडक्शनको पहिलो चलचित्र निर्देशन पनि आँफै गर्दै
‘विगत २१ वर्षदेखि मैले कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर कमाएको पैसा यसमा लगाएको छु’, निर्देशक समाजका अध्यक्ष दिनेश डि.सी. भन्दै थिए– ‘यसकारण यो चलचित्र मेरो लागी महत्वपूर्ण छ ।’ ‘मायाज बार’, ‘६ एकान ६’ जस्ता हिट चलचित्रहरु निर्देशन गरिसकेका डि.सी. अब निर्माता बनेका छन् ।
सोमवार राजधानीमा ‘फूलै फूलैको मौसम तिमीलाई’ नामक चलचित्र निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गर्दै डि.सी.ले आफ्नो जीवनभरको कमाईले चलचित्र बनाउन लागेको बताएका हुन् । ‘अरुले निर्माण गरेका धेरै चलचित्रहरु मैले बनाए तर आज ति सबैको कमाई यसमा खर्चिदै छु’, डि.सीले भने– ‘अब सोच्नुस् कस्तो बनाउँछु होला ।’
होम प्रोडक्शन ‘द दिनेश डिसी प्रोडक्सन’ को ब्यानरमा चलचित्र बन्ने पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण हुने यो पहिलो चलचित्र हुनेछ ।
डि.सी.को आफ्नै कथा र निर्देशन रहने यस चलचित्रका छायांकन यही असोज १ गतेबाट हुने बताइएको छ । चलचित्रमा नायिका निता ढुंगानासँगै आमेश भण्डारीको मुख्य भुमिका रहनेछ । आमेश यसै चलचित्रमार्फत नायकका रुपमा डेब्यु गर्दैछन् । चलचित्रमा नेपालका चर्चित कलाकारहरु राजेश हमाल, करिष्मा मानन्धर, निर शाह लगायतको विशेष उपस्थिती रहने पनि जानकारी दिइयो ।
कार्यक्रममा डि.सी.ले आफ्नी श्रीमतीलाई सभापती बनाएका थिए । रातो फुल दिदै उनले श्रीमतीलाई पत्रकारसामु चुम्बन पनि गरे । नवनायक आमेश पनि नितालाई फुल दिँदै ‘फूलै फूलको मौसम तिमीलाई’ भन्दा कार्यक्रमलाई रमाइलो बनाइदिएका थिए ।
चलचित्रको शुभ साइतमा सभासदद्वय गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी साथै चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले चलचित्रको सफलताको कामना गरेका थिए ।
चलचित्रमा सुरेश अधिकारी, अमुल कार्की र एलिस कार्कीको संगीत, एन बि. महर्जनको द्धन्द र पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहनेछ । रामजी लामिछाने र नरेशवीरले नृत्य निर्देशन गर्ने यस चलचित्रका गीतमा चर्चित गायक राजेश पायल राई, गायिका वानिका प्रधान र डि.सी आफैको स्वर दिने भएका छन् । चलचित्रमा जगदिश्वर थापाको पटकथा रहेको छ ।
आगामी वर्षको वैशाख ११ गते चलचित्र प्रदर्शन गर्ने निर्माण पक्षले लक्ष्य राखेको छ ।